सुकेको प्याजको प्रतिकिलो होलसेल मूल्य नै दुई सय रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य उपभोक्ता निस्सासिने गरी बढेको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले मंगलबारका लागि सुकेको प्याजको प्रतिकिलो होलसेल मूल्य नै दुई सय रुपैयाँ तोकेको छ । गत मंगलबार कालिमाटी...
नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन बैठक काठमाडौंमा आजबाट शुरु
काठमाडौं : नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन बैठक काठमाडौंमा शुरु भएको छ । नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँग व्यापारका लागि पहुँच विस्तार तथा दुई मुलुकबीचको व्यापारमा सहजीकरणका लागि आजबाट काठमाडौंमा बैठक शुरु भएको हो । जल मार्ग र...
घट्यो सुनको भाउ , तोलाको कति पुग्यो त ???
काठमाडौं । आज (मंगलबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ पुनः ओरालो लागेको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला ७१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबार र सोमबार छापावाल...
काठमाडौं । आज (सोमबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ स्थिर रहेको छ । आइतबार एक सय रुपैयाँ घटेर ७१ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज पनि सोही मुल्यमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी...
काठमाडौं । आज (आइतबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ पुनः घटेको छ । शुक्रबार ३ सय रुपैयाँ घटेर ७१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ एक सय रुपैयाँ घटेर ७१ जार ६ सय...
काठमाडौं : नेपाली बजारमा सुनको भाउ ३ सयले घटेको छ। शुक्रबार ३ सयले घटेर सुन तोलाको ७१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी महासंघले जनाएको छ। बिहीबार सुन तोलाको ७२ हजार...
काठमाडौं । आज साताको पाँचौं दिन (बिहीबार) सुनको भाउ थोरै घटेको छ । हिजो बुधबार ७२ हजार एक सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज आज एक सय रुपैयाँ घटेर प्रतितोला छापावल सुन ७२...
‘एडीबीले नेपालमा लगानी गरेका परियोजनाहरुको वित्तीय प्रगति अपेक्षा अनुरुप भएन ‘
काठमाडौं : एशियाली विकास बैंकले नेपालमा लगानी गरेका परियोजनाहरुको वित्तीय प्रगति अपेक्षा अनुरुप नभएको जनाएको छ । काठमाडौंमा आयोजित समिक्षा बैठकमा एडीबीका नेपाल प्रतिनिधिले नेपालका विभिन्न आयोजनामा गरेको लगानी समयमै खर्च हुन नसकेको गुनासो...
आज फेरि बढ्यो सुनको भाउ , तोलाको कति ???
बुधबार सुनको मूल्य ७२ हजार नाघेको छ। मंगलबार प्रतितोला ७२ हजारमा कारोबार भइरहेको सुनको मूल्य बुधबार ७२ हजार १ रुपैयाँमा कायम भएको हो। त्यसैगरी, तेजाबी सुनको मूल्य १ सयले बढेको छ। मंगलबार ७१ हजार ७...
भारतको विहारमा बेचियो नेपाली बिजुली
कुनै दिन दैनिक ८ घण्टा लामो लोडसेडिगं भोग्दै आएका काठमाण्डुबासी अहिले भने उज्यालोमा बस्न पाएका छन् । नेपालमा बिजुलीको उत्पादन बढ्दै गएपछि भारतबाट आयात हुने बिजुलीको परिमाण निरन्तर घट्न थालेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ...